အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၉ ( San Francisco City Tour & Alcatraz / The Rock Tour ) ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၉ ( San Francisco City Tour & Alcatraz / The Rock Tour ) ။
အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၉ ( San Francisco City Tour & Alcatraz / The Rock Tour ) ။
Posted by Foreign Resident on Mar 20, 2016 in Travel | 13 comments
အဘဖေါ ရဲ့ အမေရိက ၊ ကနေဒါ သွား ပေါ်တာ တောလား – ၁၉
( San Francisco City Tour & Alcatraz / The Rock Tour ) ။
ဒီနေ့တော့ ဟိုတယ်မှာ မနက်စာ စားပြီး ၊
San Francisco မြို့တစ်ခွင် လိုက်ပြမယ့် မဟေသီ ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း နှင့်အတူ ၊
ကြိုဝယ်ထားတဲ့ City Tour Bus ရုံး / ဂိတ် နေရာကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။
နံနက် ၉ နာရီမှာ City Tour Bus စထွက်ပါတယ် ။
San Francisco မြို့လည် တစ်လျှောက် မေါင်းရင်း နှင့် ရှင်းပြသွားပါတယ် ။
အဲ့ဒီမှာ တစ်ခု သတိပြုမိတာကတော့ San Francisco မြို့ဟာ ၊
တောင်ကုန်း အဆင်းအတက်တွေ တော်တော်များပေမယ့် ၊
ကား Traffic တွေ တော်တော်နည်း / ကားလမ်းတွေ တော်တော် ရှင်းတာကိုပါ ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ၊ Car Parking လဲ မကျပ်တာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၊ တော်တော် နေပျော်မယ့် မြို့လေးပေါ့လေ ။
တောင်ကုန်း အဆင်းအတက်တွေ နှင့် ကားလမ်းတွေ တော်တော် ရှင်းတယ် ။
19. တောင်ကုန်း အဆင်းအတက်တွေ နှင့် ကားလမ်းတွေ တော်တော် ရှင်းတယ် ။
19. အကောင်းဆုံးကတော့ ၊ Car Parking လဲ မကျပ်တာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ပထမဆုံး Bus ရပ်တဲ့နေရာကတော့ San Francisco မြို့တော် ခန်းမ Town Hall ပါ ။
ဒါကတော့ San Francisco မြို့တော် ခန်းမ Town Hall ပါ ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြို့တော် ခန်းမ ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခုရှိနေပါတယ် ။
ဆန္ဒပြပွဲက အမေရိကန် နိုင်ငံသားတိုင်း နေစရာအိမ် ရှိရမယ်ပေါ့လေ ။
” ကမာ္ဘပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး အမေရိကန် ရဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ ၊
အိုးအိမ်မဲ့ပြီး လမ်းဘေးမှာ အိပ်နေရတာ မဖြစ်သင့်ဘူး ” လို့ ပြောပါတယ် ။
San Francisco မြို့တော် ခန်းမ Town Hall ပါ ။
19. San Francisco မြို့တော် ခန်းမ Town Hall ပါ ။
19. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြို့တော် ခန်းမ ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခုရှိနေပါတယ် ။
အဘ က အဲ့ဒီမှာ တွေးနေမိတာကတော့ ၊
အမေရိကန် နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံသားတွေဟာ ၊
ကမာ္ဘပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံး ဆိုတာ ဟုတ်သေးရဲ့လား ။
အဘတော့ ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံ ရဲ့ လက်ရှိ ကြွေးမြီ အခြေအနေတွေ အရ ၊
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဟာ အချမ်းသာဆုံး ဆိုတာ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။
သူတို့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေထဲက မနိုးထကြသေးဘူး ထင်ပါတယ် ။
San Francisco မြို့တော် ခန်းမ ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ ၊
San Francisco မြို့ကို အပေါ်စီး တောင်ပေါ် View ကနေ ကြည့်ဖို့ ၊
Twin Peaks ဆိုတဲ့ တောင်ကုန်း ခပ်မြင့်မြင့်ပေါ်က ၊
Christmas Tree View Point ကို Bus နှင့် တက်လာခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါကတော့ Twin Peaks တောင်ကုန်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ San Francisco မြို့ ပါ ။
Twin Peaks တောင်ကုန်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ San Francisco မြို့ ပါ ။
19. Twin Peaks တောင်ကုန်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ San Francisco မြို့ ပါ ။
အဲ့ဒါပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ Lands End ဆိုတဲ့ ၊
ပင်လယ်ကမ်းစပ် View Point ကို သွားပါတယ် ။
အဲ့ဒီ Lands End ကနေ ပင်လယ် ကမ်းနားတစ်လျှောက် ၊
Eastern Coastal Trail ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေကြားက ၊
လမ်းလေးအတိုင်းလျှောက်ပြီး Overlook / View Point ကနေ ၊
နာမည်ကျော် Golden Gate Bridge ကို အဝေးကနေကြည့်ကြပါတယ် ။
Lands End ဆိုတဲ့ ၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ် View Point ။
19. Lands End ဆိုတဲ့ ၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ် View Point ။
Eastern Coastal Trail ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေကြားက လမ်းလေး ။
19. Eastern Coastal Trail ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေကြားက လမ်းလေး ။
Overlook / View Point ကနေ Golden Gate Bridge ကို အဝေးကြည့် ။
19. Overlook / View Point ကနေ Golden Gate Bridge ကို အဝေးကြည့် ။
Golden Gate Bridge ကို အဝေးကနေကြည့်ပြီးတဲ့ အခါ ၊
အနီးကပ်ကြည့်ဖို့ Golden Gate Bridge ခြေရင်းက ၊
City Tour Bus နှင့် ထပ်သွားကြပါတယ် ။
ဒါကတော့ နာမည်ကျော် Golden Gate Bridge ကို အနီးကရိုက်ထားတာပါ ။
19. ဒါကတော့ နာမည်ကျော် Golden Gate Bridge ကို အနီးကရိုက်ထားတာပါ ။
ဒါကတော့ Golden Gate ကြိုးတံတားမှာ သုံးတဲ့ သံကြိုး ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံပါ ။
19. ဒါကတော့ Golden Gate ကြိုးတံတားမှာ သုံးတဲ့ သံကြိုး ကန့်လန့်ဖြတ်ပိုင်းပုံပါ ။
Golden Gate ကြိုးတံတားမှာ ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ၊
City Tour Bus ရုံး / ဂိတ် နေရာကိုဘဲ ပြန်လာခဲ့ပါတယ် ။
အဘ က Sean Connery နှင့် Nicolas Cage ပါတဲ့
” The Rock ” ရုပ်ရှင်ကို ကြိုက်တဲ့သူမို့ ၊ ” The Rock ” ရုပ်ရှင် ရိုက်တဲ့ ၊
Alcatraz အကျဉ်းထောင် Tour ခရီးစဉ်သွားဘို့ စဉ်းစားထားတာပါ ။
အဲ့ဒဟာ နှင့် Alcatraz အကျဉ်းထောင် Tour ရှိတဲ့ ၊
Fisherman’s Wharf နားက Pier 33 ကို သွားကြပါတယ် ။
နေ့လည်စာ စားချိန်လဲ ရောက်နေပြီမို့ ၊ အဲ့ဒီ Pier 33 ကပ်လျက်က ၊
Butterfly Restaurant မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဘိုစာဘဲ စားလိုက်ပါတယ် ။
နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာတော့ Alcatraz Tour စထွက်ပါတယ် ။
ဒါကတော့ အဘတို့စီးတဲ့ Hornblower Hybrid သင်္ဘောပါ ။
ထူးခြားတာကတော့ အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာ Hybrid ဆိုတဲ့ နာမည် နှင့် အညီ ၊
လေ စွမ်းအင် နှင့် နေ စွမ်းအင် ကို သုံးပြီး မောင်းတဲ့ သင်္ဘောပါ ။
သင်္ဘော ရဲ့ အမိုးပေါ်မှာ ဆိုလာပြား နှင့် လေဒလက်တွေ တပ်ထားပါတယ် ။
19. ဒါကတော့ အဘတို့စီးတဲ့ Hornblower Hybrid သင်္ဘောပါ ။
Hybrid ၊ လေ စွမ်းအင် နှင့် နေ စွမ်းအင် ကို သုံးပြီး မောင်းတဲ့ သင်္ဘောပါ ။
19. Hybrid ၊ လေ စွမ်းအင် နှင့် နေ စွမ်းအင် ကို သုံးပြီး မောင်းတဲ့ သင်္ဘောပါ ။
သင်္ဘောက ၁၅ မိနစ်လောက် မောင်းပြီးတဲ့အခါ ၊
အကျဉ်းထောင်ရှိတဲ့ Alcatraz ကျွန်းကိုရောက်ပါတယ် ။
သူ့ခေတ် သူ့အခါကတော့ Alcatraz အကျဉ်းထောင်ဟာ နာမည်ကြီးပါ ။
အဆိုးဆုံး အကျဉ်းသားတွေကို Alcatraz အကျဉ်းထောင် / The Rock ကို ပို့ပါတယ် ။
Alcatraz အကျဉ်းထောင်ထဲက စာတမ်းတစ်ခုမှာ ရေးထားတာကတော့ ၊
ထောင့် အပြင် တန်း ဆိုတာ ဒါဘဲ ဖြစ်မယ် ။
ထောင် အနှံ့ကိုတော့ ကိုယ့် အစီအစဉ်နှင့်ကိုယ်ဘဲ လှည့်ကြည့်ရတာပါ ။
သူတို့ဖက်က သင်္ဘော အသွားအပြန် Time Table ပေးထားတယ်လေ ။
ကိုယ်ပြန်ချင်တဲ့ အချိန် ၊ အဆင်ပြေတဲ့အချိန် ပြန်ပေါ့ ။
ဒါကတော့ Alcatraz အကျဉ်းထောင် ရဲ့ မြေပုံ ပါ ။
19. ဒါကတော့ Alcatraz အကျဉ်းထောင် ရဲ့ မြေပုံ ပါ ။
Alcatraz အကျဉ်းထောင် ထဲ လှည့်ပါတ် ကြည့်ကြပါတယ် ။
ပထမဦးဆုံး အဆောက်အဦးမှာတော့ Alcatraz အကျဉ်းထောင် ရဲ့ ၊
သမိုင်းကြောင်း ၊ နာမည်ကျော် အကျဉ်းသားတွေ အကြောင်း စသဖြင့်ကို ၊
ဓါတ်ပုံတွေနှင့်ကော ရုပ်ရှင်ပါပြပါတယ် ။ ပြတိုက်ပုံစံပေါ့ ။
အဲ့ဒီ အခန်းပြီးတော့မှ ၊ တောင်ကုန်းပေါ်က ထောင်ကို သွားပါတယ် ။
ထောင် အဝင်ဝမှာတော့ ၊ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာတွေ ရဲ့ ၊
အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးမယ့် Audio နားကျပ်လေးတွေ ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အကျဉ်းသားတွေ ထားတဲ့ အဓိကဆောင်က ၃ ထပ်တောင် ရှိပါတယ် ။
နေရာအချို့မှာတော့ ၊ နာမည်ကျော် လူဆိုးကြီးတွေ နေခဲ့တဲ့ အခန်း နှင့် ၊
သူတို့ ရဲ့ short biography လေးတွေ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ် ။
အကျဉ်းခန်းလေးတွေက ၁ဝ ပေ x ၆ ပေ လောက် ပုံစံတူလေးတွေဖြစ်ပြီး ၊
အခန်းတိုင်းမှာ အိပ်စင် ၊ စားပွဲ ၊ စာအုပ်စင် ၊ မျက်နှာသစ်ကန် နှင့် ၊
အိမ်သာ ကမုတ်တို့ ပါဝင်ကြပါတယ် ။
အများသုံး ရေချိုးခန်းကတော့ အခန်းကျယ်ကြီး သပ်သပ် ရှိပါတယ် ။
အဘလဲ အကျဉ်းခန်းလေးထဲဝင်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပါသေး ။
19. အကျဉ်းသားတွေ ထားတဲ့ အဓိကဆောင်က ၃ ထပ်တောင် ရှိပါတယ် ။
19. အဘလဲ အကျဉ်းခန်းလေးထဲဝင်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်ပါသေး ။
ဒါကတော့ အကျဉ်းသားတွေ ဧည့်တွေ့တဲ့ နေရာပါ ။
19. ဒါကတော့ အကျဉ်းသားတွေ ဧည့်တွေ့တဲ့ နေရာပါ ။
အဘလဲ ၊ Alcatraz အကျဉ်းထောင် ( The Rock ) ကြီးထဲမှာ ၊
၂ နာရီလောက် ကြာအောင် လှည့်ပါတ်ကြည့်ပြီးသွားတော့ ၊
ညနေကလည်းစောင်း တနေကုန်လည်ထားလို့ ခြေကလည်း ညောင်းလာပြီမို့ ၊
ညနေ ၄ နာရီ Boat နှင့် ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒါကတော့ အကျဉ်းသားတွေ အညောင်ပြေလျှောက်တဲ့ Recreation Yard ။
19. ဒါကတော့ အကျဉ်းသားတွေ အညောင်ပြေလျှောက်တဲ့ Recreation Yard ။
ကွန်ကရစ်ခင်းပေါ်မှာ ငှက်ကလေးတွေ အသိုက်လုပ်နေကြတာ ။
19. ကွန်ကရစ်ခင်းပေါ်မှာ ငှက်ကလေးတွေ အသိုက်လုပ်နေကြတာ ။
ဒါကတော့ ညနေ အပြန်လမ်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ရွက်လှေလေး ။
19. ဒါကတော့ ညနေ အပြန်လမ်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ ရွက်လှေလေး ။
ဆန်ဖရန်က.. နယူးယောက်နဲ့ရော.. ချီကာဂိုနဲ့ရော.. Taste မတူဘူး..။
အရှေ့နဲ့ အနောက်ပေါင်းထားတဲ့မြို့လို့တောင် ခေါ်လို့ရမယ်..။
အာရှသား.. အထူးသဖြင့် စိန့်တိုင်းသားတွေ.. ပထမ..ဒုတိယ…တတိယမျိုးဆက်တွေအခြေချနေကြတာ…။
အဘဖော ကြည့်ရတာ အလုပ်တစ်ခု စလိုက်ရင် မပြီးမချင်း အစသိမ်း လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် ထင်ရဲ့။ လေးစားပါတယ်။ နှစ်နှစ် နီးပါး ကြာတဲ့ အထိ ဇွဲကောင်းကောင်း နဲ့ ကျွန်မတို့ ကို ခေါ်နေဆဲ။ ကျေးဇူးပါ။ :-)))
ကိုယ်က စပြီး မှတော့ ၊ ဆုံးအောင် လုပ်ရတော့ မပေါ့လေ ။
နောက်ပြီး ကိုယ့် ရဲ့ ခရီးသွား မှတ်တမ်းလေး အဖြစ်လဲ တင်ကျန်ရစ်ခဲ့တာပေါ့ ။
နို့မို့ရင် ၊ နောက် ၃ / ၄ နှစ်ဆို ၊ မေ့သွားတတ်တယ် ခမျ ။
နေစရာမရှိတဲ့ လူတွေ နဲ့အတူ
ရောယောင် ဝင်တန်းစီခဲ့ပါလား အူးလေးရာ
တန်ဖိုးနဲ အိမ်တစ်လုံးရ နဲမလား
ဒို့အဘ ဝန်ကျီးတွေနဲ့ ကွာပ
” စိန့်တိုင်းသားတွေ.. အခြေချနေကြတာ…။
ဈေးတွေအကုန်.. ခုန်တက်…။ ”
အမေရိကမှာ San Francisco နှင့် Los Angeles က ၊
လူနေမှု စရိတ် အကြီးဆုံး ၊ အိမ် ဈေး အကြီးဆုံး လို့ကြားတယ် ။
ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ ဒေသ တစ်ခုကို တရုတ်တွေ ဝင်လာပြီဆိုရင် ၊
ကောင်းကျိုး ၊ ဆိုးကျိုး ၂ မျိုး ရှိတယ် ။
ကောင်းကျိုး က ။
တရုတ်တွေ ဝင်လာရင် သူတို့က အလုပ် အရမ်းလုပ်တဲ့ အတွက် ၊
( တချို့ တရုတ်တွေက ငွေထုတ်ပိုက်ပြီး ဝင်လာတဲ့ အတွက် )
အဲ့ဒီ ဒေသ ရဲ့ စီးပွားရေး ထိုးတက်လာမယ် ။
ဆိုးကျိုး က ။
တရုတ်တွေက နဲနဲ ရိုင်းပြီး လောဘကြီးတော့ ၊
ဒေသခံတွေ နှင့် လူမျိုးရေး နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု shock ရှိမယ် ။
အခုလို ၊ အိမ်ဈေးတွေ ထိုးတက်ပြီး ဒေသခံ အမေရိကန် ( ငပျင်း ) တွေ ၊
အိမ်မဝယ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာမယ် ။
( အခု Post ထဲမှာ ဆန္ဒပြနေတာ အဲ့ဒီ ကိစ္စပေါ့ )
တစ်ချိန်ထဲမှာ တရုတ်တွေကျတော့ အရမ်းချမ်းသာလာတော့ ၊
ဒေသခံတွေရဲ့ မနာလိုမှု ပြသာနာကို တွေ့ရမယ် ။
အဲ့ဒီတော့ကာ အဲ့ဒီ ဒေသ ရဲ့ အာဏာပိုင် အစိုးရက ၊
အဲ့ဒီ ပြသာနာတွေကို ပါးပါးနပ်နပ် ဖြေရှင်းပေးမှရမယ် ။
ဩဇီမှာလည်း အလားတူ ပြသာနာတွေ တက်နေတာပါဘဲ ။
ဩဇီ အစိုးရက စီးပွားရေး တက်လာလို့ ဆိုပြီး ၊
ပြည်ကြီး တရုတ်တွေ ဝင်လာတာကို အရမ်းကြိုက် / ကြိုဆို ။
ဒေသခံ ဩဇီ ( ငမွဲ / ငပျင်း ) တွေကတော့ ၊
” Chinese Invasion ” ဖြစ်နေပါပြီ ဆိုပြီး ၊
ပါတီ အသစ်ပါထောင်ပြီးကို ဆန္ဒပြနေကြတယ် ။
တကယ်တော့ စိန့်တိုင်းသားတွေ.. ကစားခံနေရတာပါ…။
သေအောင်အလုပ်လုပ်… ပြီးတော့.. ချမ်းသာပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာ လာနေ…။
မီလီယံနာတွေ.. ဘီလီယံနာတွေဖြစ်ပြီးရင်.. ယူကေ.။ ယူအက်စ်.. ပြေးကြတာပါပဲ..။ သူတို့ငွေတွေပါယူလာသမို့.. စိန့်ပြည်.. အိနိ္ဒယပြည်… နာမယ်သာရှိ..အဆံမရှိ..ပေါ့..။
” မီလီယံနာတွေ.. ဘီလီယံနာတွေဖြစ်ပြီးရင်..
ယူကေ.။ ယူအက်စ်.. ပြေးကြတာပါပဲ ”
အင်းးးး ၊ သူတို့ သူဋ္ဌေးတွေ ဘာလို့ ပြေးကြသလဲ မသိနော် ။
သား သမီး တွေ ရဲ့ ပညာရေး အတွက် များလား ။
ကျနော် က ဩဇီနိုင်ငံသူကို ယူမိလို့သာ ဩဇီ မှာ အခြေချနေမိတာ ။
မှန်တာပြောရရင် ၊ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ပိုပျော်တယ် ။
မီး မမှန်ဘူး ၊ အင်တာနက် မကောင်းဘူး ၊ မလုံခြုံဘူး ၊ ကြိုးနီ များတယ် ။
တရားဥပဒေ မစိုးမိုးဘူး ၊ မမျှတဘူး ၊ စသဖြင့်ပေါ့လေ ။
ဒါတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ငွေ နှင့် အာဏာ နှင့် ရှင်းလို့ရပါတယ် ။ OK ပါ ။
ဒါပေမယ့် ၊ မြန်မာပြည်မှာ ၊
အစားအသောက်တွေ မသန့်ဘူး ၊ Chemical အဆိပ်တွေ ပါနေတယ် ။
လေ နှင့် ရေ လည်း မသန့်ဘူး ၊ ကားကျပ်တယ် ။
အဲ့ဒါတွေကတော့ ကိုယ်လည်း ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့မရဘူး ။ လည်စင်းခံ ဘဲ ။
ကျနော်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ ပိုပျော်တယ် ။
အခုနေသာ ဒေါ်လှ ဆယ်သန်းလောက်သာ ထီပေါက်ရင် ၊
ကျနော် မြန်မာပြည်ကို ပြောင်းနေမှာ ။
ကျုပ်သာ ဒေါ်လာငါးသန်းလောက်ထီပေါက်ရင် ဘိနပ်တောင်မစီးပဲ ဒီနိုင်ငံက အမြန်ဆုံး ချက်ချင်းထွက်မယ်
စိတ်ကြီးလှချီလား ဦးပါ ရဲ့ ။
ဦးပါတို့ ကျနော်တို့လို အရွယ်မှ ဒီဖက်နိုင်ငံတွေကို ပြောင်းလာရင် ၊
တကယ်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ ငယ်ပေါင်းက မရနိုင်တော့ဘူးလေ ။
ဆွေမျိုးသားချင်းကလည်း မရှိဘူးလေ ။
ရန်ကုန်မှာလို ထိုင်ရာမထရဘဲ လုပ်ပေးမယ့် အိမ်ဖေါ်လဲ မရှိဘူး ။
ရှိရှိသမျှ အလုပ်တွေ မြက်ရိတ် အိမ်ရှင်း ထမင်းချက် စသဖြင့် အားလုံးကို ၊
ကိုယ်တိုင်ဘဲ လုပ်ရမှာ ။ အရမ်းပင်ပန်းမယ်ဗျ ။
နောက်ပြီး ဒီဖက်နိုင်ငံတွေမှာ ၊
ဒေါ်လှ သန်း ၁၀ဝ လောက်ရှိမှ ၊ သူဋ္ဌေးတန်း ဝင်တာဗျ ။
ကိုယ်တွေ ရန်ကုန်မှာ နေသလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း မသုံးနိုင်ဘူး ပေါ့ဗျာ ။
ရန်ကုန်မှာ ကတော့ ၊ ကိုယ်တွေက သုံးနိုင် ဖြုန်းနိုင်သူ လေ ။
( ရန်ကုန်မှာက ဈေးလဲပေါတယ်လေ ၊ ဥပမာ သာမီးလေးတွေ ၊ ဟီ ဟိ နောက်ထှာ )
ဒီဖက်နိုင်ငံတွေမှာက သူလို ကိုယ်လို ဘဝကို ပြန်ရောက်သွားရော ။
အားသာချက် ရှိသလို ၊ အားနည်းချက် တွေလဲ ရှိနေတာပါဘဲ ။
သဘာဝ အလှအပ အစုံတွေ့ရတယ်နော်။